Teny tsara indrindra avy amin'i Frank Sinatra - Victor Mochere
Fotoana famakiana: 13 mn novakiana
Francis Albert Sinatra dia mpihira sy mpilalao Amerikana. Izy dia iray amin'ireo mpanakanto mozika be mpividy indrindra hatramin'izay, ary efa namidy rakitsoratra 150 tapitrisa maneran-tany. Sinatra dia voataona be tamin'ny fomba fitenin'i Bing Crosby akaiky sy mora henoina ary nanomboka ny asany tamin'ny mozika tamin'ny vanim-potoanan'ny swing niaraka tamin'ireo mpitarika ny tarika Harry James sy Tommy Dorsey. Nahita fahombiazana tamin'ny maha-mpanakanto solo azy i Sinatra taorian'ny nanaovany sonia tamin'ny Columbia Records tamin'ny 1943, lasa sampy an'ireo "bobby soxers".
Namoaka ny rakikirany voalohany, The Voice of Frank Sinatra, i Sinatra, tamin'ny 1946. Na izany aza, tamin'ny fiandohan'ny taona 1950, dia nitsahatra ny asany tamin'ny sarimihetsika ary nitodika tany Las Vegas izy, izay lasa iray amin'ireo mpilalao residence malaza indrindra ao anatin'ny Rat Pack. . Ny asany dia teraka indray tamin'ny 1953 niaraka tamin'ny fahombiazan'ny sarimihetsika From Here to Eternity, ny zava-bitany dia nahazoany loka Akademia ary loka Golden Globe ho an'ny Mpilalao Mpanohana Tsara indrindra.
Avy eo i Sinatra dia namoaka rakikira maro be noderaina, ary ny sasany amin'izy ireo dia voamarika ho anisan'ireo "album hevitra" voalohany, anisan'izany ny In the Wee Small Hours (1955), Hira ho an'ireo tia an'i Swingin! (1956), Avia manidina miaraka amiko (1958), Irery ihany (1958), No One Cares (1959), ary Nice 'n' Easy (1960). Nandao an'i Capitol i Sinatra tamin'ny 1960 mba hanomboka ny mari-pamantarana firaketany manokana, Reprise Records, ary namoaka andian-dahatsary nahomby.
Tamin'ny 1965, noraketiny ny rakitsary retrospective September of My Years ary nilalao tao amin'ny fahitalavitra fanta-daza Emmy Frank Sinatra: Lehilahy iray sy ny mozikany. Taorian'ny famoahana an'i Sinatra tao amin'ny Sands, voarakitra tao amin'ny Sands Hotel and Casino any Vegas miaraka amin'ny mpiara-miasa matetika Count Basie tamin'ny fiandohan'ny taona 1966, ny taona nanaraka dia nandrakitra ny iray amin'ireo fiaraha-miasa malaza indrindra nataony tamin'i Tom Jobim, ilay rakikira Francis Albert Sinatra & Antonio Carlos Jobim. Nanaraka izany ny Francis A. & Edward K. tamin'ny 1968 niaraka tamin'i Duke Ellington.
Nisotro ronono voalohany i Sinatra tamin'ny 1971, saingy niala tamin'ny fisotroan-dronono roa taona taty aoriana. Nanoratra rakikira maromaro izy ary nanohy ny fampisehoana tao amin'ny Caesars Palace, ary namoaka ny "New York, New York" tamin'ny 1980. Tamin'ny fampiasana ny fampisehoana Las Vegas ho toy ny trano fonenana, dia nitety an'i Etazonia sy iraisam-pirenena izy mandra-pahafatiny tamin'ny 1998. Sinatra dia nanao asa tena nahomby tamin'ny maha-mpilalao sarimihetsika azy. Taorian'ny nahazoany ny loka Akademia ho an'ny From Here to Eternity, dia nilalao tao amin'ny The Man with the Golden Arm (1955), ary ny The Manchurian Candidate (1962).
Niseho tamina mozika isan-karazany toa ny On the Town (1949), Guys and Dolls (1955), High Society (1956), ary Pal Joey (1957), nahazo ny Golden Globe iray hafa ho an'ity farany. Tany amin'ny fiafaran'ny asany dia nilalao mpitsikilo matetika izy, anisan'izany ny anaram-boninahitra ao amin'ny Tony Rome (1967). Nahazo ny loka Golden Globe Cecil B. DeMille i Sinatra taty aoriana tamin'ny 1971. Tamin'ny fahitalavitra, nanomboka tamin'ny ABC ny Frank Sinatra Show tamin'ny 1950, ary nanohy niseho tamin'ny fahitalavitra izy nandritra ny taona 1950 sy 1960.
Sinatra koa dia nandray anjara betsaka tamin'ny politika nanomboka tamin'ny tapaky ny taona 1940, ary nanao fampielezan-kevitra ho an'ny filoha toa an'i Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman, John F. Kennedy ary Ronald Reagan. Nohadihadian'ny FBI izy noho ny voalaza fa nifandray tamin'ny Mafia. Na dia tsy nianatra namaky mozika aza i Sinatra, dia niasa mafy izy hatramin'ny fahazazany mba hanatsarana ny fahaizany amin'ny lafiny rehetra amin'ny mozika.
Mpilalao tonga lafatra, nalaza noho ny fahaizany mitafy sy ny fanatrehany, dia nanizingizina foana ny handray an-tsoratra mivantana miaraka amin'ny tariny. Ny masony manga mamiratra no nahazo azy ny anaram-bositra malaza hoe “Ol' Blue Eyes”. Nitondra fiainana manokana maro loko izy, ary matetika no tafiditra tamin'ny raharaha korontana tamin'ny vehivavy. Nanana fifandonana mahery vaika i Sinatra, matetika tamin'ny mpanao gazety izay heveriny fa niampita azy, na lehiben'ny mpiasa izay tsy nitovizany hevitra.
Nomem-boninahitra tao amin'ny Kennedy Center Honors izy tamin'ny 1983, nahazo ny Medaly Filohan'ny Fahalalahana avy amin'i Ronald Reagan tamin'ny 1985, ary ny Medaly Gold Congressional tamin'ny 1997. Sinatra ihany koa no nahazo ny loka Grammy iraika ambin'ny folo, anisan'izany ny Grammy Trustees Award, Grammy Legend. Loka sy ny loka Grammy Lifetime Achievement. Matetika izy no heverina ho mpihira lehibe indrindra tamin'ny taonjato faha-20, ary mbola hita ho olo-malaza.
Ny sasany amin'ireo teny tsara indrindra avy amin'i Frank Sinatra dia voatanisa etsy ambany.
"Ny namana dia tsy fanerena velively." - Frank Sinatra
"Ny namana amiko dia tsy manana firazanana, tsy misy saranga, ary tsy anisan'ny vitsy an'isa." - Frank Sinatra
“Tsy fantatry ny lehilahy ny atao hoe fahasambarana raha tsy efa manambady. Efa tara loatra izao.” - Frank Sinatra
“Ny hoe 'Tiako ianao' tsotra dia midika mihoatra noho ny vola." - Frank Sinatra
"Ny tovovavy mahay mandanjalanja dia izay manana loha foana sy akanjo ba feno." - Frank Sinatra
“Mety ho fahavalo ratsy indrindra ho an’ny olombelona ny toaka, nefa milaza ny Baiboly hoe tiavo ny fahavalonao.” - Frank Sinatra
"Mandry amin'ny masoandro mandritra ny andro izy ireo, ary rehefa milentika ny masoandro, dia mandry indray izy." - Frank Sinatra
"Amin'ny fo dia ataoko fa mpihira saloon aho satria misy fifandraisana akaiky kokoa eo amin'ny mpilalao sy ny mpihaino ao amin'ny boîte de nuit." - Frank Sinatra
“Tsy nampihena ny isan'ny mpihaino ahy ny hevitra ratsy; ny hevitra tsara dia tsy nanampy na oviana na oviana ny isan'ny olona ao amin'ny mpihaino ahy; aoka ho mpitsikera anao manokana. - Frank Sinatra
“Fa raha hitanao fa tena zava-dehibe izany, dia ataovy izany. Tsy maintsy manapa-kevitra ianao. Na dia heverinao aza fa nandao zavatra betsaka ianao mba hahazoana zavatra kely, dia vetivety ihany no misy ny fanaintainana. Tena lasa izy io.” - Frank Sinatra
“Saingy amiko, ny fivavahana dia zavatra tena manokana izay iarahan’ny olona sy Andriamanitra irery, tsy misy ny mpamosavy eo afovoany.” - Frank Sinatra
“Manana fitenenana ny mpilalao karatra hoe: tsy maninona ny milalao raha mibanjina ny masonao ianao - izay fomba iray hafa hamonjena, ny fiambenana mandrakizay no vidin'ny fahafahana." - Frank Sinatra
"Ataovy ny satrokao - ny zoro dia fihetsika." - Frank Sinatra
"Sahia mitafy ny tarehy clown adala." - Frank Sinatra
"I Dean Martin dia notoraham-bato matetika kokoa noho ny masoivohon'i Etazonia." - Frank Sinatra
"Dean Martin dia mamo tsy misy fepetra. Ary raha mamorona ekipa misotro olympika isika dia izy no ho mpanazatra. - Frank Sinatra
“Aza mamaly, tezitra.” - Frank Sinatra
“Aza afenina ny ratranao. Izy ireo no mahatonga anao ho iza ianao.” - Frank Sinatra
“Aza mamaly ny lafy ratsiny amin'ny fanenjehana bebe kokoa. Ampidino fotsiny ny lohanao ary porofoy fa diso ireo mpitsikera anao.” - Frank Sinatra
"Isaky ny mahita ny tenako mitsambikina aho, dia mitsangana ary miverina amin'ny hazakazaka." - Frank Sinatra
"Ny tahotra no fahavalon'ny lojika." - Frank Sinatra
"Alefaso any amin'ny volana aho, avelao aho hilalao eny amin'ny kintana." - Frank Sinatra
"Tsy misy olon-kafa, nanome ahy fientanam-po - miaraka amin'ny fahadisoanao rehetra, mbola tiako ianao. Tsy maintsy ianao izany, mahafinaritra ianao, tsy maintsy ianao izany. " - Frank Sinatra
“Fa inona ny olona, ​​inona no ananany? Raha tsy ny tenany, dia tsy manana na inona na inona izy. - Frank Sinatra
“Nandritra ny taona maro, nikarakara faniriana miafina aho handany ny fahefatra amin'ny volana Jolay amin'ny fandriana indroa miaraka amin'ny swingin' mena mena midadasika - saingy tsy hitako mihitsy ny fandriana roa." - Frank Sinatra
“Mampandoa ahy ny rivotra madio. Tsy zakako izany. Aleoko manodidina ny sigara Denobili telo mitsoka amin’ny tarehiko mandritra ny alina.” - Frank Sinatra
"Mandehana mamitaka, raha sitrakao dia tsy manam-potoana aho." - Frank Sinatra
"Ny helo dia tsy manana fahatezerana tahaka ny mpihaza amin'ny literatiora." - Frank Sinatra
“Manahoana, fandraisam-peo ity, niantso ny laharana mety ianao, manantona ary aza averina indray." - Frank Sinatra
“Ahoana no ahafahako tsy miraharaha an’ilay tovovavy eo akaikiny? Tiako mihoatra noho izay azoko lazaina izy.” - Frank Sinatra
“Zavatra hatsarana aho.” - Frank Sinatra
“Mino izaho sy ianao. Tahaka an'i Albert Schweitzer sy Bertrand Russell ary Albert Einstein aho amin'ny maha-manaja ny fiainana – amin'ny endriny rehetra. Mino ny zavaboary aho, ny vorona, ny ranomasina, ny lanitra, ny zavatra rehetra hitako, na misy porofo marina momba izany.” - Frank Sinatra
“Mino aho fa fantatr’Andriamanitra izay tadiavintsika sy ilainy.” - Frank Sinatra
“Afaka niakatra an-tsehatra aho ary nanao pizza ary mbola ho avy hijery ahy ihany ry zareo.” - Frank Sinatra
"Tsy fantatro izay tsapan'ny mpihira hafa rehefa manonona tononkira izy ireo, fa noho ny maha-manic-depressive 18-karat aho ary niaina tamin'ny fiainana feno fifanoherana ara-pihetseham-po mahery vaika, dia manana hery mahery vaika aho amin'ny alahelo sy ny firavoravoana." - Frank Sinatra
“Malahelo ny olona tsy misotro aho satria rehefa mifoha maraina izy ireo dia izay no tsara indrindra ho tsapany mandritra ny andro.” - Frank Sinatra
“Mahazo mpijery mandray anjara manokana amin'ny hira iray aho – satria mandray anjara amin'ny tenako aho.” - Frank Sinatra
“Tiako ny vehivavy manan-tsaina. Rehefa mivoaka ianao dia tsy tokony ho fifaninanana mitazam-potsiny izany.” - Frank Sinatra
“Tiako ireo tovovavy rehetra ireo tahaka ny fitiavany ahy. Mahazo taratasy an'arivony isan-kerinandro avy amin'ireo tovovavy tia ahy aho. Isaky ny mihira hira aho dia mitia azy ireo. Mpihira boudoir aho.” - Frank Sinatra
"Malahelo azy aho - Elvis - tena namana. Lehilahy mafana sy be fiheverana ary malala-tanana izy.” - Frank Sinatra
"Heveriko fa ny ambim-bavako lehibe indrindra amin'ny fiainana dia ny mampita amin'ny hafa izay fantatro." - Frank Sinatra
“Heveriko fa raha manao ny tsara indrindra vitanao ianao eo amin'ny fiainanao, dia hahazo valisoa ara-drariny ianao. Indraindray ianao mahafoy zavatra be dia be mba hahazoana fiaramanidina tadiavinao." - Frank Sinatra
"Tiako ny hotsaroana ho toy ny lehilahy iray nanana fotoana mahafinaritra niainana, lehilahy nanana namana tsara, fianakaviana tsara - ary tsy mieritreritra aho fa afaka mangataka zavatra mihoatra noho izany, raha ny marina." - Frank Sinatra
“Izaho dia ho amin'ny fahamendrehana – fe-potoana. Izaho dia amin'ny zava-drehetra izay maneho fitiavana sy fiheverana ny mpiara-belona amiko. Saingy, rehefa mamela ny firaisana amin'ny biby amin'ny alarobia sy ny famotsoran-keloka amin'ny Alahady ny molotra amin'ny andriamanitra mistery iray - alao vola aho. " - Frank Sinatra
"Izaho dia ho an'izay mahazo anao mandritra ny alina." - Frank Sinatra
“Ho velona mandra-pahafatiko aho.” - Frank Sinatra
“Mpihira fotsiny aho, i Elvis no endriky ny kolontsaina amerikana manontolo.” - Frank Sinatra
“Tezitra amin'ny boky tsara aho, tsy afa-po aho.” - Frank Sinatra
“Tsy anisan'ireo saka sarotra sy mifangaroharo aho. Tsy mitady ny tsiambaratelon'ny fiainana aho - mandeha isan'andro aho, maka izay mitranga." - Frank Sinatra
“Tokony hanana Ph.D. momba ny vehivavy. Saingy, ny marina dia matetika aho no diso fanantenana.” - Frank Sinatra
“Tena tia vehivavy aho; Mankasitraka azy ireo aho. Saingy, toy ny lehilahy rehetra, dia tsy azoko izy ireo. - Frank Sinatra
“Efa saribakoly aho, mahantra, jiolahin-tsambo, poeta, pion, ary mpanjaka.” - Frank Sinatra
“Efa nieritreritra aho hoe nahoana ianao no tsy maintsy lazalaza mba hahazoana loka amin'ny fanampiana olon-kafa.” - Frank Sinatra
“Niaina fiainana feno aho, nandehandeha tamin'ny lalambe rehetra, ary mihoatra noho izany. Nanao izany aho. " - Frank Sinatra
"Raha nanao izay rehetra azoko natao aho, dia hiresaka aminao avy amin'ny siny laboratoara ao amin'ny Harvard Medical School aho." - Frank Sinatra
"Raha tsy midika hoe manana fahafahana hiara-hiasa amin'ny olona tianao ny fahefana, dia tsy tena manana izany ianao." - Frank Sinatra
“Raha tsy fantatrao ilay lehilahy any an-dafin’izao tontolo izao, dia tiavo ihany izy fa toa anao ihany izy. Mitovy ny nofinofiny sy ny fanantenana ary ny tahotra. Tontolo iray izany ry namana. Mpiara-monina izahay rehetra.” - Frank Sinatra
"Raha manana zavatra ianao nefa tsy azonao omena, dia tsy manana izany ianao fa manana anao izy." - Frank Sinatra
“Amin’ny ora marain’ny andro, dia izao no fotoana malahelo azy indrindra indrindra.” - Frank Sinatra
"I Billie Holiday no, ary mbola mijanona, ny fitaomana mozika tokana lehibe indrindra tamiko." - Frank Sinatra
“Ela be aho vao nianatra izay fantatro ankehitriny, ary tsy tiako ho faty miaraka amiko izany.” - Frank Sinatra
“Tao anatin’ny sanganasa iray nampisara-bazana ahy noho ny fitondran-tenako manokana izy io, nefa nilaza ilay mpanoratra fa rehefa nanomboka ny mozika ary nanomboka nihira aho, dia ‘marina’ aho.” - Frank Sinatra
“Ny hevitro dia ny hanao ny feoko amin'ny fomba mitovy amin'ny trombone na lokanga – tsy toa azy ireo, fa 'milalao' ny feo tahaka ireo mpitendry zavamaneno ireo." - Frank Sinatra
“Tsy voatery ho tonga any am-piangonana ny alahady mba hanatona Azy. Afaka mahita Azy na aiza na aiza ianao.” - Frank Sinatra
“Tsy zavatra minia ataoko izany – tsy afaka manampy ny tenako aho. Raha fitomaniana noho ny fahaverezan'ny fitiavana ilay hira dia marary ny tsinaiko. Mahatsapa ny famoizana ahy aho ary mitomany ny fanirery, ny ratram-po ary ny fanaintainana tsapako. " - Frank Sinatra
“Las Vegas no hany toerana fantatro izay tena iresahana ny vola – hoy izy hoe, 'Veloma.'” - Frank Sinatra
“Andao hanakimpy ny masontsika ka hanao ny paradisa ho antsika.” - Frank Sinatra
“Aleo lazaina fa tsy zava-dehibe ilay toerana, raha mbola samy manana fotoana mahafinaritra ny rehetra.” - Frank Sinatra
“Ny fitiavana sy ny fanambadiana, ny fitiavana sy ny fanambadiana, dia miaraka toy ny soavaly sy ny kalesy. Izao no lazaiko aminao, rahalahy, tsy afaka manana iray ianao raha tsy misy ilay iray.” - Frank Sinatra
“Ny fitiavana dia rehefa te hihira isan’andro sy alina. Tsy misy sarany sy mpitantana.” - Frank Sinatra
"Enga anie ianao ho 100 taona ary ho ahy ny feo farany henonao." - Frank Sinatra
"Ny ankamaroan'ny zavatra nosoratana momba ahy dia manjavozavo lehibe, saingy tadidiko fa nofaritana tamin'ny teny tsotra iray izay ekeko." - Frank Sinatra
“Nisy firaiketam-po sy fifanajana ary fahatsapana tena niombonana tamiko ny namako. Soatoavina mandrakizay tsy azo sokajiana ara-poko ireo. Izany no fomba fijeriko ny hazakazaka. - Frank Sinatra
"Tsy misy na inona na inona nolazaina na nosoratana momba ahy na oviana na oviana, raha tsy rehefa mitranga izany." - Frank Sinatra
“Oh, maniry aho raha hisy olona hanandrana handratra anao mba hahafahako mamono azy ireo ho anao.” - Frank Sinatra
“Orange no loko mahafaly indrindra.” - Frank Sinatra
“Vao avy tamin’ny hazon’aina no nioty plum ho ahy.” - Frank Sinatra
“Matetika ny olona no milaza fa tsara vintana aho. Zava-dehibe ihany ny vintana raha ny fahazoana fahafahana mivarotra ny tenanao amin'ny fotoana mety. Aorian'izay dia tsy maintsy manana talenta sy fahaizana mampiasa azy io ianao.” - Frank Sinatra
"Ny olona mivelona amin'ny harenan'ny hafa na ny fahasahiranana dia katsentsitra." - Frank Sinatra
“Nenina – nanana vitsivitsy aho; fa avy eo indray, vitsy loatra raha tsy voatonona”. - Frank Sinatra
"Ny rock 'n roll dia mihira, milalao ary nosoratan'ny ankamaroan'ny goons cretinous ary amin'ny alàlan'ny famerimberenana saika tsy misy dikany sy fetsy, maloto, raha ny marina, tononkira maloto - dia mitantana ny mozika martial an'ireo mpandika lalàna rehetra. ambonin’ny tany”. - Frank Sinatra
"Rock 'n roll dia mamofona hosoka sy diso." - Frank Sinatra
Ary nisy nilaza hoe: Sotroo ny rano, fa izaho kosa hisotro ny divay. - Frank Sinatra
"Indraindray aho manontany tena hoe nahoana aho no mandany ny alina manirery hanonofy hira." - Frank Sinatra
"Mijanona ho velona, ​​mijanòna ho mavitrika, ary manaova fanazaran-tena araka izay azonao atao." - Frank Sinatra
"Mifofofofo lalina, alaivo ny tenanao, esory ny tenanao, ary atombohy indray." - Frank Sinatra
"Ny tsara indrindra dia mbola ho avy ary tsy ho tsara ve izany." - Frank Sinatra
"Ny valifaty tsara indrindra dia fahombiazana goavana." - Frank Sinatra
"Ny lesona lehibe eo amin'ny fiainana, ry zaza, dia tsy matahotra na iza na iza na inona na inona." - Frank Sinatra
“Tsy hanampy anao hanadino azy ny sigara ampirehetinareo.” - Frank Sinatra
"Rehefa nahita azy nitsiky aho dia fantatro fa fombako fotsiny izy." - Frank Sinatra
"Ny hany mpihira lehilahy hitako ankoatra ny tenako ary tsara kokoa noho izaho - dia i Michael Jackson." - Frank Sinatra
"Ny zavatra tena nisy fiantraikany tamiko dia ny fomba nilalaovan'i Tommy ny tromboneny." - Frank Sinatra
"Ary indray, tiako ny fientanentanana hiseho eo anatrehan'ny mpanatrika fampisehoana lehibe." - Frank Sinatra
“Misy fotoana mangina loatra. Indrindra amin’ny alina na vao maraina. Amin'izay fotoana izay dia fantatrao fa misy zavatra tsy ampy eo amin'ny fiainanao. Fantatrao ihany.” - Frank Sinatra
“Misy zavatra maromaro heveriko fa ho nataoko raha nanana fahafahana indray aho. Mety ho nanam-paharetana kokoa aho tamin'ny fivoahana teto amin'izao tontolo izao. Ho nijery izany aho fa nanana fianarana ara-dalàna kokoa. Ho lasa mu nahavita aho. " - Frank Sinatra
"Betsaka ny fankasitrahana nambara momba ny talenta sy ny fampisehoana nataon'i Elvis nandritra ny taona maro, izay ekeko amin'ny fo manontolo." - Frank Sinatra
“Tsy misy zavatra mampahory, mampahory, mampahory tena, mampahory eo amin’izao tontolo izao ho an’ny tsirairay na ho an’ny firenena iray.” - Frank Sinatra
“Nandritra ny asako, raha nanao zavatra aho, dia nibanjina ny naoty rehetra sy ny teny rehetra nohiraiko – raha manaja ilay hira aho. Raha tsy afaka manolotra izany amin'ny mpihaino iray aho dia tsy mahomby. " - Frank Sinatra
"Te hitomany, te hitomany, te hihomehezana toy ny loon." - Frank Sinatra
“Mety ho natao ho an'ny tsirairay isika. Na ho tonga na tsia, aoka ny fontsika hahita.” - Frank Sinatra
“Forum inona? Tsy nanana izany mihitsy aho, ka tsy afaka nilaza hoe inona no tena akora ilaina. Heveriko fa manana singa iray iraisan'ny rehetra izay mahomby amin'ity orinasa ity – ny talenta nomen'Andriamanitra antsika. Miankina amin’ny fomba ampiasana azy ny ambiny.” - Frank Sinatra
“Izay ataoko amin'ny fiainako dia avy amin'ny asako ihany. Miaina izany amin’ny fomba tsara indrindra azoko atao aho.” - Frank Sinatra
“Inona no ilana ny mihira tononkira mahafinaritra raha tsy azon’ny mpihaino izay lazaina na re?” - Frank Sinatra
“Na inona na inona zavatra hafa voalaza momba ahy manokana dia tsy misy dikany. Rehefa mihira aho dia mino. Marina aho.” - Frank Sinatra
"Na inona na inona olana dia miala aminao izany." - Frank Sinatra
“Iza no mahalala izay lalana hitondrana antsika. Ny adala ihany no hilaza. - Frank Sinatra
"Ianao sy ny fijerinao dia mahatonga an'ity tantaram-pitiavana ity ho mafana loatra ka tsy azo atao." - Frank Sinatra
"Ianao no iriko amin'izay rehetra ivavahako sy ivavahako." - Frank Sinatra
"Aleo variana amin'ny fiainana ianao, satria ny fahafatesana dia maharary ny boriky." - Frank Sinatra
“Mividy Ferrari ianao rehefa te ho olona. Mividiana Lamborghini ianao rehefa olon-kafa ianao. " - Frank Sinatra
"Tonga ianao ary nanomboka naneno ny zava-drehetra." - Frank Sinatra
“Mety ho mpanakanto tonga lafatra indrindra eran'izao tontolo izao ianao, fa ny mpihaino dia toy ny olon-kafa – raha tsy miraharaha ianao, Endsville.” - Frank Sinatra
“Mifoha ianao ary mieritreritra an’ilay zazavavy, ary aza mieritreritra ny hanisa ondry mihitsy.” - Frank Sinatra
"Mety ho piozila ianao, saingy tiako ny fomba mifanaraka amin'ireo ampahany." - Frank Sinatra
"Indray mandeha ihany ianao no mandehandeha, fa raha milalao tsara ny karatrao ianao dia ampy ny indray mandeha." - Frank Sinatra
"Indray mandeha ihany ianao no velona, ​​ary ny fomba fiainako indray mandeha dia ampy." - Frank Sinatra
"Mitondra vehivavy toy ny vehivavy ianao ary vehivavy toy ny vehivavy." - Frank Sinatra
"Na manana ianao na tsy manana fomba, ary raha manana izany ianao dia miavaka amin'ny iray kilaometatra." - Frank Sinatra
“Tokony ho eo amin'ny baolina ianao manomboka amin'ny fotoana hidiranao amin'io jiro io. Tokony ho fantatrao tsara izay ataonao isaky ny segondra eo amin'io sehatra io, raha tsy izany dia miditra ao amin'ny efitra fandroana ilay hetsika. Vita tanteraka ny amin'iny. Tafandria mandry." - Frank Sinatra
Teny tsara indrindra avy amin'i John J. Pershing
Ahoana ny fiarovana ny orinasanao amin'ny cybercriminalité